Lọ Ahịa Onyinye M | David Bridburg Onye Okike
Daalụ maka ikwe kuki
David Bridburg ~ Debe Osisi Oge A
Pụrụ Iche Fine Art Ahụmahụ
Blog Art m
Bipụta plọ ahịa
Etu esi azụrụ m ụlọ ahịa onyinye m
Nka maka onye obula
Na-achọ ihe ọhụrụ ma dị iche na nka. Ọ kwesịrị ịdị irè? Chọrọ ụzọ ọhụụ ọhụụ iji rụpụta ọrụ aka?
My Post Nka nka ọgbara ọhụụ na-ahụtụbeghị mbụ taa.
Laa azụ na kọleji agwara m onwe m ka m ghara imepụta ihe osise ihe atụ ma ọ bụ nke adịghị ahụ anya. Kedu ihe nke a pụtara? Achọrọ m ime ihe dị nnọọ iche. Kọmputa na-enye onye omenkà nke oge a ikike nghọta n'ụzọ abụọ ọhụrụ na nnukwu na ọkwa micro na ọrụ ahụ.
Gịnị mere ọrụ a ji dị iche? Ihe m họọrọ banyere isiokwu. Dị ka ihe eji egwu egwu emepụta ihe, anaghị m emepụta ọchị. Ọtụtụ mgbe, m na-ekepụta amamịghe mara ezigbo mma n'ụzọ pụrụ iche.
Layered 18 Monet nke David Bridburg
Mbipụta na-abịa dịka canvases, foto, metal, acrylic na osisi. Ntucha na matting dị na ịchọ. A na-eji ihe eji eme ihe ngosi nka.
11 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
The akwukwo inset nwere otu nke m nsụgharị nke Vincent van Gogh "Almọnd okooko osisi". M na-ejigharị ihe oyiyi m mepụtara n'oge ọrụ m niile.
Egwuregwu Igwe eletrik na Orange Red site n'aka David Bridburg aka JazzDaBri
JazzDaBri, aka David Bridburg, Nchịkọta bụ nnwale na ịlụ di na nwunye obere nghọta eserese na adịghị adị. Usoro a na-egwu egwu. E nwere 21 dị iche iche ngwá egwú ọ bụla na-abịa megide 4 dị iche iche na agba backdrops.
Usoro a bu maka ulo ogwu egwu, ndi n’ebido igwu egwu, onye nkuzi egwu na ndi nwere ekele maka egwu.
Egwu egwu 32 site n'aka David Bridburg
The Post Contemporary Collection nwere ihe oyiyi anụmanụ m. Nkịta, anụ ọhịa wolf, a nkịta ọhịa, nnukwu nwamba, enwe, walrus na ndị ọzọ… .. Why the “Music Notes x” title? Ọ bụ naanị ebe a maka ihe ndị ọzọ anyị ndị nka na-eme na “Untitled x”.
Ọ bụ ezie na nka na-ere ahịa n'oge a na-ere ahịa dị ka ihe dị ka ihe osise nke oge a na-eme ka ihe dịghachi ndụ. Nke a bụ nkọwa gbasara mmekọrịta mmadụ na nwoke.
Oge a 7 Verspronck
Nke a bụzi nwa bebi plastic. Echere m na enweghị m ike inyere onwe m aka. Aghaghị m ịga miri emi. LOL
Nchịkọta Contemporary na-achọpụta mmepe nke isiokwu a bụrụ ihe dịka usoro na-aga n'ihu.
Daalụ ndị ahịa m. Ndi nke buputara m ihe kariri otu ugbo, i nyela aka mee ka oru m buru. Ndi na achota m na nke mbu.
M na-etinye aka karịa mgbe ọ bụla na nka. Ihe ohuru bu uzo m n’ime uwa NFT crypto. Dị ka ọtụtụ ndị na-ese ihe dịka oge. Ihe m kwere gị nkwa bụ ime ya n'ụzọ m pụrụ iche.
PS, abughi m anwụrụ anwụrụ, mana ahịhịa ndị ahụ na-eme nka ọfụma.
Edebanyela ihe oyiyi m na US Office Office. Ọrụ m adịghị na Ngalaba Ọha.
Googlelọ ahịa Google, Microsoft, Facebook na Instagram
Etu esi ahụ ndị omenkà na-ahụ anya maka onye mbido
Otu m ga - esi jiri Vincent Van Gogh Paintings gwuo egwu
Etu Ifuru Osisi ndi m di nfe
Ingmepụta ihe nkịta ndị na-amalite ndị ọkachamara
Omenala ndi ozo
Art nke America Lovehụnanya
New York Times Ngalaba Nka
Golọ ihe nkiri Van Gogh
Metropolitan Museum nke Art
Bipute Osisi Osisi Osisi Osisi
Bipute Osisi ohuru nke oge a
Biputere Osisi Osisi Abstract Art
Copyright © 2020 My Blog, eStar ~ Daalụ maka ọrụ gị GretaThemes.